Ministry of Foreign Affairs – Page2– Nay Pyi Taw
State Counsellor attends ASEAN Summit
Documentary photo of leaders of ASEAN countries at the opening ceremony the 32nd ASEAN Summit in Singapore
State Counsellor met with Viet Nam Prime Minister on 19 April 2018
Union Minister U Kyaw Tin attends the 18th Mid-term Ministerial Conference of the Non-Aligned Movement in Baku, Azerbaijan
State Counsellor in Canberra
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi takes part in ASEAN-Australia summit
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်မှ International Committee of the Red Cross (ICRC) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Stephan Sakalian အား လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တူရကီသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Union Minister for International Cooperation receives State Secretary of Foreign Affairs of Norway
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
December 4, 2019(၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် International Committee of the Red Cross (ICRC) ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Stephan Sakalian အား ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ၁၃:၀၀နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ အထူးသဖြင့် ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် ICRCမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းများ၊ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ ICRC ဌာနေကိုယ်စားလှယ်မှ ICRCအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံစေခြင်း၊ မိုင်းအန္တရာယ် ပညာပေးဟောပြောပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ အကျဉ်းသားများ၏ လူနေမှု အခြေအနေများ ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အကျဉ်းထောင်များသို့ သွားရောက်လေ့လာခြင်း၊ ရွေ့လျားကျန်းမာရေးအဖွဲ့များစေလွှတ်ခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ခြင်းတို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု လုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ICRC ၏ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန် ဆွစ်ဖရန့် ၆၃ သန်း ခွဲဝေချထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။...
December 4, 2019(၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ ချန်းဟိုင်အား ၄-၁၂-၂၀၁၉ ရက် နေ့ (၁၅၀၀) နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များနှင့် မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ သံတမန်ဆက်ဆံရေး နှစ်(၇၀)ပြည့်မြောက်မည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားများ ပူးတွဲကျင်းပရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ...
December 3, 2019U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation received Ms Marianne Hagen, State Secretary of the Foreign Affairs of Norway at 8:30 am on3December 2019 at the Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw. At the meeting, they cordially exchanged views on matters pertaining to the strengthening of bilateral relations and cooperation, providing assistance to Myanmar’s efforts for peace and national reconciliation, democratization and development. They also discussed on recent developments in Rakhine State and issues of mutual interest. The Union Minister for International Cooperation hostedaworking luncheon for the visiting Norwegian Delegation at the Park Royal Hotel, Nay Pyi Taw. Ref; The Global New Light of Myanmar အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နော်ဝေ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ (၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် နော်ဝေနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Ms. Marianne Hagen အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်၊ (၀၈၃၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာ-နော်ဝေ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ကြိုးပမ်းမှုများအား ကူညီပံ့ပိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်၏ နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူကိစ္စရပ်များကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အဆိုပါ နော်ဝေ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်ရှိ Park Royal ဟိုတယ်၌ အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ...
ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့၊ Sjam Fair ၌ ကျင်းပသည့် 2019 Charity Bazaar တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့မှ ပြခန်းပါဝင်ဖွင့်လှစ်
December 3, 2019(၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့) ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့၊ International Women’s Club မှ ကြီးမှူး၍ ၁-၁၂-၂၀၁၉ ရက်တွင် ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့၊ Sjam Fair ၌ 2019 Charity Bazaar ကို ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့မှ ပြခန်းဖွင့်လှစ်၍ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးအနေဖြင့် မြန်မာ့ရိုးရာ အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ၊ ရွှေထမင်းတို့နှင့်အတူ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ကြာဇံကြော်တို့ကို ရောင်းချခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရိုးရာ ယွန်းထည်ပစ္စည်းများ၊ ကျောက်စီပန်းချီကားများ ခင်းကျင်းပြသခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် မြန်မာ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ပြပွဲလာရောက် သူများကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ခရီးသွားလက်ကမ်းစာစောင်များကို ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒေသန္တရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှင်းပြခြင်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မြန်မာသံရုံးသည် ပွဲမှ ရရှိသည့် အမြတ်ငွေ ဒီနာ ၂၀,၀၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀ ခန့်) ကို ဆားဘီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသို့ လှူဒါန်းရန် ရည်ရွယ်၍ International Women’s Club သို့ လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ International Women’s Club သည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်က စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး ဆားဘီးယားနိုင်ငံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရှိ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများ၏ ဇနီးများ၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးမှ အကြီးအကဲများ၏ ဇနီးများ၊ ဆားဘီးယားနိုင်ငံမှ စာရေးဆရာများ၊ အနုပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး အဖွဲ့ဝင် (၂၀၀) ကျော်ရှိပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည် ဆားဘီးယားနိုင်ငံအတွင်း လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးနိုင်ရန် Charity Bazaar များကို နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပြီး ယခုနှစ် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Charity Bazaar မှ အကျိုးအမြတ်ရငွေများကို ဆားဘီးယားနိုင်ငံအတွင်းရှိ သက်ကြီးရွယ်အိုများ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များသို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခု ကျင်းပခဲ့သည့် Charity Bazaar တွင် နိုင်ငံ (၂၇) နိုင်ငံမှ သံရုံးများ၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီးက ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား သွားရောက်တွေ့ဆုံ
December 3, 2019(၃-၁၂-၂၀၁၉၊ မနီလာမြို့) ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးသည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E Mr. Teodoro Locsin Jr. အား ၂၉-၁၁-၂၀၁၉ ရက်၊ ညနေ ၀၄၀၀ နာရီတွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ သွားရောက် ဂါရ၀ပြုတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် သံအမတ်ကြီးက နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာတွင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ထောက်ခံရပ်တည်ပေးနေသည့်အတွက် ကျေးဇူးဥပကာယတင်ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လိုကြောင်း၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပညာရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူအချင်းချင်း ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်လိုကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများမှ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ထောက်ကူမှုပြုနေသည့်အချက်ကိုလည်း လေ့လာလိုကြောင်းဖြင့် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။...
သံတမန်များ စုပေါင်းကျင်းပသော International Christmas Festival တွင် မြန်မာသံရုံး၊ ပရာ့ဂ်မြို့မှ ပါဝင်ခဲ့ခြင်း
December 3, 2019(၃-၁၂-၂၀၁၉ ရက်၊ ပရာ့ဂ်မြို့) ချက်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဒေါ်ကေသီစိုး ဦးဆောင်သော မြန်မာသံရုံးမိသားစုများနှင့် ချက်နိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစုများ စုပေါင်း၍ Diplomatic Spouses Association Prague မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော International Christmas Festival တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါပွဲတော်ဖွင့်ပွဲသို့ ချက်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဇနီးဖြစ်သူ Mrs. Monika Babisova နှင့် ချက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ဇနီးဖြစ်သူ Mrs. Iva Petrickova တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး၊ မြန်မာသံရုံး၏ ခင်းကျင်းပြသရောင်းချမှုတို့ကို လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြပါသည်။ ပွဲတော်တွင် နိုင်ငံအလိုက် ဒေသထွက်ကုန်များရောင်းချခြင်း၊ ဒေသထွက် ရိုးရာအစားအသောက်များ ရောင်းချခြင်းနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အဆို/အကများဖြင့် ဖျော်ဖြေခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာ မြန်မာသံရုံး၊ ပရာ့ဂ်မြို့မှ မြန်မာ့ရိုးရာ လက်မှုပစ္စည်းများ ခင်းကျင်းပြသရောင်းချခြင်း၊ ချက်နိုင်ငံရောက် မြန်မာပညာတော်သင်များမှ မြန်မာအကများဖြင့် ကပြဖျော်ဖြေခြင်းနှင့် ပရာ့ဂ်မြို့တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော မြန်မာလူမျိုးပိုင် Yangon Restaurant မှ မြန်မာသံရုံးနှင့် ပူးပေါင်း၍ မြန်မာအစားအသောက်များ ရောင်းချခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ရရှိသော အမြတ်ငွေများအား Diplomatic Spouses Association Prague မှတစ်ဆင့် ချက်နိုင်ငံရှိ မိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာများနှင့် အမျိုးသမီးများဂေဟာများသို့ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။...